कहिले सार्वजनिक होला सामसङ ग्यालेक्सी एस–२१ एफइ? :: एजेन्सी :: Setopati
कहिले सार्वजनिक होला सामसङ ग्यालेक्सी एस–२१ एफइ?
सोल, कार्तिक १
केही समययता सामसङको नयाँ स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सी एस–२१ एफइ’को चर्चा बढिरहेको छ। गत वर्ष सार्वजनिक भएको ‘ग्यालेक्सी एस–२० एफइ’को सफलतापछि कम्पनीले सो नयाँ स्मार्टफोन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अब भने उपभोक्ताहरु यही फोनको प्रतिक्षामा छन्।
ग्याजेट ३६०का अनुसार नयाँ ‘ग्यालेक्सी एस–२१ एफइ’ अर्को वर्ष सार्वजनिक हुनेछ। पहिले यो स्मार्टफोन यही अक्टोबर महिनामा बजारमा आउने भनिएको थियो, तर लिक्सहरुले सन् २०२२ को जनवरीमा सार्वजनिक हुनसक्ने अनुमान गरेको छ।
रोस योंग र जोन प्रोसेसर जस्ता नामी टिप्सटरहरुले पनि ट्विटरमा सामसङको ‘ग्यालेक्सी एस–२१ एफइ’ अर्को वर्षको जनवरी ११ मा बजारमा आउने बताएका छन्। हालसम्म कम्पनीले यसबारे कुनै आधारिक जानकारी नदिएको हुनाले यो केबल अनुमान गरिएको मिति भएको उनीहरुले जनाएका छन्।
‘ग्यालेक्सी एस–२१ एफइ’मा ६.४ इन्चको एमोलेड डिस्प्लेसहित १२० हर्जको रिफ्रेस रेट हुनेछ। यसमा तीनवटा क्यामरा हुनका साथै क्वालकम स्न्याप्ड्रैगन ८८८ एसओसी प्रोसेसर हुनेछ। एक रिर्पोटले भने यो स्मार्टफोनमा चार हजार पाँच सय एमएएचको ब्याट्री हुने सक्ने अनुमान गरेको छ। यो निलो, खैरो, हरियो, सेतो र बैजनी रङमा उपलब्ध हुने ग्याजेट ३६० ले बताएको छ।
यसैगरी सामसङको आउँदो कार्यक्रम ‘ग्यालेक्सी अनप्याक्ड पार्ट २’ यही अक्टोबर २० मा हुने भनिएको थियो, तर कम्पनीले कस्ता उपकरण आउने भनेर कुनै जानकारी दिएको छैन।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १, २०७८, ०४:४८:२४